Munaasabad Duco iyo Deeq ururin ah oo loo sameeyay Qoyska Marxuun Axmed Ciyow -
Masjidka Darul Faruq oo ku yaalla magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota ayaa xalay lagu qabtay munaasab loogu ducaynayey Allaha u naxariistee marxuun Axmed Ciyo.
Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen dad aad u tiro baddan ayaa waxaa soo qaban qaabiyey maamulka masaajidka Darul Faruq oo iyagu dhexda u xirtay sidii ay u taageeri lahaayeen qoyska, xaaska iyo carruurta marxuun Axmed Ciyow.
Marxuun Axmed Ciyow oo isagu degenaa magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota ayaa kamid ahaa dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho 14-kii bishan October.
Qaraxa ka dhacay magaalada Muqdisho 14-kii bishan October ayaa ahaa kii ugu weynaa ee magaalada ka dhaca, kaasi oo ay ku dhinteen dad ka badan 300 oo qof, islamarkaana boqolaal kale ay ku dhaawacmeen.
Jaylain Xussein oo kamid ah hogaamiyeyaasha Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa isagu barnaamijka xiriirinayey.
Sheekh Maxamed Xussein ayaa isagu aayadaha Quranka ku furay munaasabada. Cali Faarax oo ay mudo aad u badan marxuun Axmed Ciyow saaxiibo ahaayeen ayaa ka soo safray magaalada Portland si uu uga qeyb qaato kulankan loogu ducaynayey saaxiibkiis.
Cali Faarax ayaa isagu u tacsiyadeeyay xaaska, carruurta, ehelka iyo qaraabadda marxuun Axmed Ciyow. Cali ayaa sheegay in saaxiibkiis Axmed uu ahaa Aabe iyo qof fiican oo naxariis baddan. Waxa uuna ka sheekeyay taariikhda marxuun Axmed oo kooban.
Abshir Cumar oo ah seediga marxuunka Axmed Ciyo oo isaguna ka soo safray gobolka Iowa ayaa sheegay in marxuun Axmed uu ahaa qof jecel dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisa.
Abshir Cumar ayaa goobta ka yiri, “Qaraxa waxa uu ahaa wax laga naxo, argagixisaddu ma laha arxan”. Abshir Cumar oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in Argagixisaddu ayna waji iyo diin lahayn, balse ay leedahay dad ku waaya noloshadooda, hanti dooda iyo mustaqbalkooda.
Megan Helling iyo Lutalo Bowens oo iyagu ka socday shirkadda Emerson oo ah meeshii uu ka shaqayn jiray marxuun Axmed Ciyow ayaa iyaguna tacsi tiiraanyo leh u diray xaaska, carruurta iyo qoyska Axmed.
Megan oo iyadu maamule u ahayd marxuun Axmed ayaa sheegtay in uu Axmed shirkadda u shaqaynayey mudo 12 sanno ah. Megan ayaa tiri, “Axmed wuxuu ahaa qof maskax furan, waxbarashadda jecel, shaqo wanaagsan oo dadaal baddan”.
Waxaa kale oo meesha ka hadashay Maamulaha iskuulka Valley View oo ah iskuulka ay Axmed carruurtiisu dhigtaan. Cabdiqadir iyo Axmed oo iyagu ay marxuun Axmed meel ka wada shaqeyn jireen.
Cabdulahi Faarax oo isagu kamid ah maamulka Masaajidka Darul Faaruuq oo iyagu munaasabadan soo qaban qaabiyey ayaa sheegay in marxuun Axmed uu ahaa, “Qof Salaada subax masaajidka ku soo tukada, qoyskiisa iyo xaaskiisuna ay aad ugu xiran yihiin”.
Cabdullahi Faarax ayaa sheegay sababta ay masaajid ahaan u qabteen kukankan weyn in ay tahay, taageero hiil iyo hooba ah oo ay la garab istaagayaan qoyska marxuun Axmed Ciyow.
Siyaad Cali oo kamid ah hogaamiyeyaasha Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota, kana shaqeeya xafiiska haweenayda Senatoradda ah ee Amay Klobuchar ayaa goobta ka akhriyey fariin qoraal ah oo ay soo dirtay Senator Amy Klobuchar.
Siyaad Cali ayaa yiri, “Marxun Axmed wuxuu ahaa qof wanaagsan. Ilaahay ma dayacayo agoonta uu Axmed ka tagay iyo hooyadood. Kuligeena waan in aan shucuurteena ficil u badalno oo aan ku taageerno qoyska marxuun Axmed”.
Haddaba Sheekh Maxamed oo isaguna u duceeyay qoyska marxuunka ayaa dadweynihii munaasabada joogay u sheegay in masaajidka iyo bulshadii meesha joogta ay is ku yimaadeen in qoyska Axmed laga caawino sidii daymaha lagu leeyahay looga bixin lahaa, gaar ahaan bixinta deynta guriga ay carruurta iyo qoyska marxuun Axmed ay ku dhaqan yihiin.
Sheekh Maxamed ayaa bilaabay deeg arruurin, waxaana goobta laga arruuriyay lacag lagu taageerayo qoyska Marxuunka. Sidoo kale waxaa dadka lala wadaagay sanduuq lacag arruurin ah oo barta internetka ee Go Fund Me. Waxaana dhamaan dadkii goobta joogay lagu dhiirigeliyay in ay ka qayb qaataan taageeradda agoonta iyo qoyska marxuun Axmed Ciyow.
Allaha u naxariistee marxuun Axmed Ciyow ayaa dhamaan dadkii yaqaanay ee munaasabadda ka hadlay ay ku sheegeen in uu ahaa qof Dabeecad wanaagsan, Diin jecel, Naxariis baddan, Akhlaaq wanaagsan oo qof yar iyo qof weynba isku si kula dhaqmi jiray.
Xigashadda sawiradda: Star Tribune
Minneapolis Police Continue to Investigate Fatal Crash Involving Pedestrian